Akhriso Tirakoob: Kudhowaad 20 kun oo Askari oo Sanad Gudihii lagu dilay Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Akhriso Tirakoob: Kudhowaad 20 kun oo Askari oo Sanad Gudihii lagu dilay Afqaanistaan.
Last updated May 6, 2018 193 1
Lajnada Warfaafinta Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa baahisay tirakoobka howlgalladii Al-Mansuuriyah ee gugii hore Imaarada Islaamiga kaga dhawaaqday wadankaas, kaas oo beegsanayay Shisheeyaha kusoo duulay dalkaasi muslimka ah.
Wadarta guud ee howlgalladu waxay gaarayaan 8030 howlgal, 50 kamid ahna waxaa camaliyaad Nafhurnimo oo ay fuliyeen rag katirsan Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan.
Marka laga hadlo diyaaradaha ay Mujaahidiintu soo rideen laga soo billaabo 28 April 2017 illaa 28 April 2018-ka oo ah xilliga uu socoday howlgalka Al-Mansuuriyah waxay gaarayaan 14 diyaaradood oo hellecopter ah, 5 nooca diyaaradaha duuliye la’aanta ah, iyo 2 kuwa xamuulka ah. Gaadiidka dagaalka ee sanadkaas ay Mujaahidiintu gubeen waxay gaarayaan 2786 gaari, waxaana leh ciidamad Shisheeyaha, iyo kuwa xukuumadda Kaabul.
332 askari oo kamid ah ciidamada Shisheeyaha ayaa tirakoobka lagu soo gudbiyay in lagu dilay Afqaanistaan intii uu socday howlgalka Al-mansuuriyah, waxaana ka dhaawacmey Shisheeyaha 152 askari.
Ciidamada Xukuumadda Kaabul ayaa ah kuwa ugu badan ee uu gaaray khasaaraha dhimshada iyo dhaawaca, 16908 askari ayaa laga dilay, halka laga dhaawacay 10207 askari, waana intiii uu socday keliya howlgalka Al-Mansuuriyah.
Saraakiisha xukuumadda Kaabul ee sida gaarka ah loo beegsaday, laguna guuleystay in nolosha la dhaafiyo waxay gaarayaan 506 sarkaal, waxayna isugu jiraan saraakiisha ciidanka, sirdoonka, gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka iyo xitaa xubnaha katirsan goloyaasha dowladda Kaabul.
Isla markii uu dhamaaday howlgalka Al-Mansuuriyah, waxay Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ku dhawaaqday howlgal kale oo cusub oo loogu magacdaray Al-khandaq, waxaana howlgalkan oo maalmo kahor billowday uu si dardar leh uga socodaa guud ahaan gobollada wadanka Afqaanistaan ee ay kusoo duuleen Shisheeyaha.
Akhri Tirakoobka ay soo saartay Lajnada Warfaafinta ee Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan.
Abuu Curwa says 3 years ago
maanshalaah ilaahay guusha kama dambaysta ahna haydin siiyo idinka iyo raga kale ee kor u qaaday calankii nebi moxammed SWC.